Soo-saareyaasha & Alaabada Alaabada | Shiinaha Products Factory
Qalabka Rabitaanka Eyga Madaxa Laba-geesood ah
1.Madaxda labada eey ee aaladaha doonista ee ilkaha oo si isku mid ah loo qaybiyey si dhakhso leh looga saaro timaha dhinta ama dabacsan, guntiinnada iyo dhaldhalaalka si loo helo natiijooyin wanaagsan.
Aaladda labada weji ee cunugga ee kaliya ee maqaarka ka saarta maydka, laakiin sidoo kale waxay bixisaa duugista maqaarka si ay u kiciso wareegga dhiigga maqaarka. Ilkaha waxaa loogu talagalay inay si qoto dheer u galaan jaakadda iyaga oo aan xoqin maqaarka xayawaankaaga
3.Labada madax ee eeyaha rabitaanka labada eey waa ergonomic leh anti-sibiibixan oo gacmeed jilicsan. Wuxuu sifiican ugulahaa gacanta. Mar dambe culeys gacan ama culeys ah ma saarna ilaa iyo inta aad cadeyneyso xayawaankaaga.
Faylka Ciddiyaha Ciddu si ammaan ah ayuu si fudud ugu gaaraa ciddiyaha dhammaaday ee geeska Dheeman. Kiristaalo yaryar oo ku dhegan nikkel ayaa si dhakhso leh u fayl gareeya ciddiyaha xayawaanka. Sariirta faylka ciddiyaha xayawaanku waa isku dhejisan yihiin si ay ugu habboon tahay ciddiyaha.
Faylka ciddiyaha xayawaanku wuxuu leeyahay gacan qabad leh iyo xajin aan siibasho lahayn.
Xirmada Eyga Oxford ee la hagaajin karo waxaa ka buuxa isbuunyo raaxo leh, wax culeys ah kuma lahan qoorta eyga, waa naqshad ku habboon eeygaaga.
Xariga eeyga hagaajintiisa lagu hagaajin karo waxaa lagu sameeyaa waxyaabo mesh mesh lagu neefsan karo oo tayo sare leh. Waxay ku haysaa xayawaankaaga xayawaanka ah ee wanaagsan oo qabow iyadoo ku ilaalinaysa xukunka guud.
Xakamaynta dheeraadka ah ee dusha sare ee xarigani waxay sahlaysaa in la xakameeyo oo loo socdo jiidista adag iyo eeyaha waayeelka ah
Xariggan eyda Oxford ee la hagaajin karo waxay leedahay 5 cabir, oo ku habboon eeyaha yar yar ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn.
Burush Timo Faydi Timaha
1.Bashiilkan timaha bisada cadeynaya wuxuu ka saarayaa timaha dhintay dabacsanaanta iyo timo daadashada xayawaanka rabaayadda ah ayaa xayawaankaaga si wanaagsan u hagaajinaya.
2. Burushka tirtiraha timaha bisadu wuxuu ka samaysan yahay caag jilicsan oo leh nashqad yar, iyadoo la adeegsanayo mabda'a korantada si uu u nuugo timaha.
3.Waxaa loo isticmaali karaa in lagu duugo xayawaankaaga rabaayadda ah iyo xayawaankuna waxay bilaabi doonaan inay ku nastaan ​​dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa burushka timaha bisadda.
4. Burushka wuxuu ku habboon yahay dhammaan cabbirka eeyaha iyo bisadaha. Waa sahay xayawaan ku habboon oo si sahlan loo isticmaali karo, qolkaaga ka dhig mid nadiif ah oo caafimaad qaba.
Caday maydhashada eey
Burushka Qurxinta Eyga waxay leedahay biinano jilicsan oo jilicsan, isla markiiba waxay soo jiidan kartaa dabacsan oo dhogorta ka ridi kartaa jaakada xayawaankaaga inta xayawaankaaga la duugaayo ama la maydhayo. Waxay si fiican uga shaqeysaa eeyaha iyo bisadaha leh dhammaan cabirrada iyo noocyada timaha!
Tilmaamaha qabashada raaxada ee jilicsan ee dhinaca burushka duugista eeyga waxay ku siineysaa xakameyn weyn xitaa marka burushka uu qoyan yahay. Burushka ayaa kaa caawin kara baabi'inta isku-dhafka iyo xoqidda maqaarka dhintay, samaynta jaakad nadiif ah oo caafimaad leh.
Ka dib markaad cadayato xayawaankaaga, kaliya si fudud biyo ugu maydh eeygan burushka duugista ah. Kadibna waa diyaar marka xigta isticmaalka.
123456 Xiga> >> Bogga 1/15